Ikhemisi - Ukuboniswa okulula okulula - I-Best Digital Signage Software!
Gqamisa ikhemisi lakho
BONISA ISENZO SAKHO SOKUFUNDA
NOMA ISikhungo SEMPILO
Khulisa ukuthembela futhi uthuthukise isipiliyoni sakho sokulinda iziguli zakho ...
Noma ngabe unendlela yokusebenza yezokwelapha ephithizelayo yedolobha noma unikeza ikhambi lokuvikela ukunakekelwa kwempilo, i-Easy Multi Display ikusiza ukukhulisa ukuthembela kwakho kweziguli zakho futhi kuzinikeze nesipiliyoni sokulinda ababekade bekufuna.
Xhumana nathi namuhla ukudingida izidingo zakho bese uqala ukuthola izinzuzo zokubonisa ibhizinisi lakho ngesoftware ekhombisa ukuthenga imali eningi futhi elula kakhulu emakethe.
Landa Incwajana Yekhemisi (fr)Thola Ukufinyelela Okusheshayo
Landa Incwajana Yekhemisi (en)Thola Ukufinyelela Okusheshayo
QAPHELA ISIVIVINYO SOKULINDA
Isikhathi sokulinda iziguli zakho sizandizela njengoba usebenzisa i-Easy Multi Display ukujabulisa iziguli zakho njengoba zisalinde ukuqokwa kwazo.
YAKHA ITHEMBA KWENKONZO YAKHO
Ngokufundisa iziguli zakho ngebhizinisi lakho nangezinga lobuchwepheshe bakho, iziguli zakho ziyahamba zizwa umuzwa wokuthembela webhizinisi lakho.
BONISA IMISEBENZI YAKHO
Ingabe unikezela ngezinsizakalo eziningi, noma ukukhuphula ukuhlanganisa izinsiza? Leli yithuba lakho lokukhombisa iziguli zakho ukuthi yikuphi okunikezwayo.
Njengoba igama libonisa, Kulula ukuyisebenzisa i-Easy Multi Display. Angazi lutho ngamakhompyutha. Nge-EMD sinesisombululo sokulinganisa kahle izibonakaliso zedijithali ehhovisi lethu lamazinyo.
Isixazululo esinezibonakaliso zezibonakaliso ezinhlelweni zethu zokuzivocavoca umzimba sazisa futhi siqinisekise iziguli zethu. Lokhu kwenza ukuthi sikwazi ukubeka ubuso ngemuva kwamagama abasebenzi bethu. Sibonisa nezeluleko ezisebenzayo zeziguli zethu. Kuyasiza futhi kwenza ukulinda kube mfushane.
Ukuzivocavoca Umzimba, Wavre